192.168.8.1 - Fa maninona no miadana ny Internet-ko?
Fomba 6 ambony hiatrehana fifandraisana Internet miadana
Tsy misy zavatra mahasosotra kokoa noho ny fananana rohy Wi-Fi na Ethernet mahafinaritra hafainganam-pandeha amin'ny Internet. Ireto ambany ireto ny hevitra sasany hamahana olana, hanitsiana, mba handresena fotsiny ny hafainganam-pandeha miadana amin'ny Internet.
1. Zahao ny drafitry ny Internet
Indraindray, miadana ny fifandraisanao amin'ny Internet rehefa mandoa vola amin'ny Internet ianao. Midira ao amin'ny tranokalan'ny mpamatsy anao ary fantaro izay drafitra anananao. Tsidiho izao ny fast.com na tranonkala hafa hafa ary manao fitsapana haingana. Ny fomba tsara indrindra hanafainganana ny Internet dia ny fanavaozana ny drafitrao.
2. Omeo ny fitaovanao ny fanamboarana manerantany
Zahao ny router & modem anao ary manaova famerenana haingana ary jereo raha mandeha izany. Diniho ireo PC hafa ao an-tranonao mba hahitana raha misy izany aterineto miadana. Raha ao amin'ny PC iray monja ny olana dia ny PC no olana fa tsy ny modem na ny router anao.
3. Amboary ireo famantarana Wi-Fi anao
Raha miresaka Wi-Fi ianao, dia mety ho hitanao fa milamina ny Internet & ny router; mbola marefo ihany ireo signal tsy misy taribyo. Izy io dia mety hiteraka fihenam-bidy taloha-na, farafaharatsiny, fanandramana feno trano fatoriana. Avy eo, mety hitaky ny famindrana, ny famafana ary ny fanamafisana ny router amin'ny teknika sasany ianao.
4. Atsaharo na ferana ny fampiharana bandwidth-hogging
Raha toa ka mandeha tsara ny fitaovana dia tandremo raha misy programa fanampiny mifehy ny fifandraisana. Ohatra, raha misintona rakitra amin'ny BitTorrent ianao dia hiadana kokoa ny fizahana tranonkala mahazatra. Tokony hiezaka hametraka fanitarana aza ianao toy ny Privacy Badger & AdBlock Plus izay hanakana ny sasany amin'ireo doka, horonan-tsary & sary mihetsika manjaka amin'ny bandwidth, izay mety handany ny fifandraisanao.
5. Mampiasà mpizara DNS farany
Raha manoratra adiresy ao anaty tranokala ianao, ny PC dia mampiasa DNS fantatra amin'ny hoe hikaroka sy handika izany ho adiresy IP misy valiny PC. Indraindray, na izany aza, ny mpizara ampiasain'ny PC anao hikarohana izay fampahalalana mety misy olana, na hidina tanteraka. Soa ihany, manana safidy malalaka haingana kokoa ianao hampiasaina, toy ny Cloud flare na Google DNS.
4. Mifandraisa amin'ny mpamatsy Internet anao
Raha efa nandalo ny dingana rehetra ilaina amin'ny famahana olana ianao & mbola miadana ny interneto dia tonga ny fotoana hifandraisanao amin'ny mpamatsy Internet anao ary jereo raha efa tapitra ny olana. Fanamarihana: aza mieritreritra fotsiny hoe nanao zavatra tsy mety izy ireo ary mitsinjo ny serivisy serivisy ho an'ny mpanjifanao. Azo antoka fa hahazo valiny lehibe ianao raha toa ka manome anao ny hafainganam-pandeha tsy marina izy ireo mandritra izany fotoana izany.
5. Hatsarao ny Internet raha mila fifandraisana miadana ianao
Mety maharitra fotoana fohy ny famahana ny olana amin'ny Internet miadana, ary mandritra izany fotoana izany dia mitaky fitetezana ihany ianao. Na angamba ianao any amin'ny cafe na amin'ny sidina, ary tsy misy azonao atao amin'ny hafainganam-pandeha miadana. Ka noho izany, tonga ny fotoana hanamafisana ny tranonkalanao ho an'ny fifandraisana miadana.
6. Miasa hendry kokoa
Raha tsy maintsy vitao ny asa amin'ny fifandraisana miadana dia mety mila misafidy asa hafa ianao fa tsy amin'ny Internet. Zarao amin'ny bandwidth-light ary koa ny mavesatra-bandwidth. Rehefa eo amin'ny fifandraisana miadana ianao dia ataovy izay maivana ary angony miaraka daholo ny lahasa mavesatra rehetra mba hahafahanao manao azy ireo raha vao mahazo fifandraisana haingana ianao.